Wararka Maanta: Khamiis, Mar 28, 2013-Booliiska Magaalada Boosaaso oo Shaaciyay Magacyada Dad lagu Tuhunsan yahay Weerarkii shalay ee Xawaalada KAAH
Mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda ammaanka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in baaritaan dheer kaddib la helay raadad muujinaya haybta dadkii shalay dhacay xawaalada KAAH, waxaana warbixin kasoo baxday xafiiska wasaaradda amniga lagu xusay magacyadan:
Ina Cabdullaahi Kabal.
Eedeysane Farxaan Dad-laq ayaa warbixinta lagu xusay in uu isagu ahaa maskaxda ka danbeysey weerarka, islamarkaana uu hogaaminayey kooxdii fulisey. Farxaan Dad-laq ayaa la sheegay in muddooyinkii u danbeeyey uu ku doodayey in dalka koonfur Africa uu ku dhacay in ay hayb wadaagaan mulkiileyaasha xawaaladda KAAH.
Waxaana mas’uuliyiin ka tisan KAAH oo HOL la hadlay aya sheegeen in xawaaladda laga dhacay lacag lagu qiyaasay $20,000 (labaatan kun oo Doolar). Dableyda dhaca geystey ayaa sidoo kale diley Cabdirashiid Maxamed Guuleed iyo Xasan Weyrax oo ka tirsanaa howl-wadeenada shirkadda.
Weerarkii shalay lagu qaaday xawaaladda KAAH ee magaalada Boosaaso ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee noociisa ah ee ka dhaca gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland.